Torohevitra momba ny fisafidianana ny fahana tsara indrindra ho an'ny alikanao | Tontolo alika
Ny sakafo feno, manan-karena mineraly sy vitamina, no fototry ny fahasalaman'ny alikantsika, satria ny tsy fihinanan-tsakafo dia mitarika aretina maharitra. ny Mieritreritra kalitao aho tena ilaina izany, noho izany ny safidin'ny iray na ny hafa dia misy ifandraisany indrindra. Mba hahafantarana hoe iza no tsara indrindra amintsika, dia misy antony maromaro tsy maintsy raisina.
Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia TAONA ny biby. Miankina amin'ny dingana vitany, tsy hitovy ny filany, indrindra fa alika alika izy ary mandritra ny fahanterany. Soa ihany fa mahita sakafo manokana ho an'ireto dingana ireto isika, na dia tsara kokoa aza ny manatona mpitsabo biby.
Ny hazakazaka Io dia antsipiriany hafa mifandraika amin'izany, satria arakaraka izany dia miovaova ny metabolisma alika. Miankina amin'ny toetran'ny alika ihany koa izany; Raha ohatra ka tsy mahazaka zavatra sasany na olana amin'ny digestive ny biby dia tsy maintsy misafidy a mieritreritra aho manokana Mbola hanampy antsika indray ny hevitry ny manam-pahaizana.
Ny firafitry ny fahana dia ny angona izay milaza amintsika marina raha sakafo kalitao izany; afaka mahita an'io fampahalalana io amin'ny fonosana ihany isika. Zava-dehibe ny famakiana azy io tsara mba hahazoana antoka fa ny fahana dia misy indrindra proteinina biby, izay hiseho voalohany amin'ny lisitry ny singa.
Faharoa dia tokony hiseho ny gliosida (vary, katsaka ary varimbazaha), arahin'ireo sira mineraly sy vitamina. Farany, ho hitantsika ireo additives artifisialy, na dia tsara kokoa aza raha tsy eo izy ireo. ary io farany io dia mazàna dia miteraka alèjia sy aretin-kibo.
Toy izany koa, ny zavatra tsara indrindra dia izany tsy misy vokarin'ny biby, zavatra indrisy fa fahita mahazatra amin'ny sakafon'ny biby. Ireto no vavam-bava, loha sy entrails an'ny biby, mora vidy kokoa noho ny hena kalitao, fa tsy manana vitamina ho an'ny vatan'ny alikantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Torohevitra momba ny fisafidianana ny fahana tsara indrindra ho an'ny alikanao